६ पालिकाले ल्याए आगामी आवका लागि बजेट, कुनको कति ? - Arthatantra.com
६ पालिकाले ल्याए आगामी आवका लागि बजेट, कुनको कति ?
काठमाडौं । विहीबार देशका विभिन्न पालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
केही पालिकामा भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । ललितपुर महानगरपालिकाले आज बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको हो ।
आज वीरगन्ज महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, सूर्य विनायक नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, खैरहनी नगरपाकिा र वीरेन्द्रनगरपालिकाले पनि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् कुनका पािलकाको कति बजेट ?
वीरगन्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याईएको हो । विनियोजित बजेट मध्य चालु खर्चतर्फ १ अर्व ८६ करोड ३५ लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख र वत्तीय व्यवस्थातर्फ ६ करोड ७० लाखको बजेट सार्वजनिक गरीएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका :
आगामी आवका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ६० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजित बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट २४ करोड ३८ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ५६ करोड ८ लाख, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट प्राप्त १२ करोड ६६ लाख संघीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्ब २ करोड, नगर विकास कोषबाट अनुदान ९ करोड र चालुवर्षको मौज्दातबाट ५६ करोड व्यहोरिने बताइएको छ ।
सूर्य विनायक नगरपालिका :
सूर्य विनायक नगरपालिकाले आगामी आवका लागि १ अर्ब ५७ करोड ६३ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
जसमध्ये चालुतर्फ शाखागत कार्यक्रम १८ करोड ८६ लाख ७६ हजार, सामाजिक सुरक्षा १४ करोड, वडागत चालू कार्यक्रमका लागि २ करोड १५ लाख रूपैँया विनियोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाले चालू १६ करोड २० लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरी कूल ५१ करोड २२ लाख ५८ हजार पूँजीगत कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड ९८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र सशर्त कार्यक्रमतर्फ ३२ करोड ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गोदावरी नगरपालिका :
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले आगामी आवका लागि १ अर्ब ८२ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ९३ करोड ४४ लाख २० हजार र पुँजीगत योजनातर्फ ८८ करोड ६१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
खैरहनी नगरपाकिा :
चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ९० करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेट अनुसार कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ४४ करोड २७ लाख ४४ हजार र पुँजीगततर्फ ४६ करोड ४५ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । विभिन्न कोषहरुमा ८५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक आय १४ करोड ६५ लाख रहेको छ ।
वीरेन्द्रनगर पालिका :
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आवका लागि १ अर्ब ५६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
जसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब १३ करोड १९ लाख र पूँजीगतर्फ ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । नगरपालिको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ अर्ब ४२ करोड ९९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
नगरपालिकाले संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट २५ करोड २० लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ करोड ९३ लाख, संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट १५ करोड १३ लाख र प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट २४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बताइएको छ ।
वि.सं.२०७८ असार १० बिहीवार १९:२२ मा प्रकाशित
अघिल्लाे ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयनका लागि सरकार र परिसंघबीच समझदारी
पछिल्लाे जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ निष्काशन, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १५:३२